Soo-saareyaasha Mashiinka Mashiinka ee loo yaqaan 'KN95 Mashiinka Mashiinka iyo Warshadaha - Shiinaha Warshadaha Maskaxda Maskaxda
Faahfaahinta ： FFP1 / FFP2 / FFP3 Respirator Maskoolka Ciidda NIOSH Daadi kara N95 Wajiga Mashiinka Alaabada Mashiinka N95 Maska / ffp1 maaskaro / ffp2 maaskaro / ffp3 maaskaro Waxyaabaha cufnaanta sare ee dharka aan dunta lahayn + tayo sare leh firfircooni karbo kaarboonka + shaandhada suufka ah + kuwa aan qotomin dharka midabka Grey, Caddaan, Qiimaha Neefsashada Buluuga ah Nooca Heerarka Isqarxinta Dhegaha / Codadka Niosh, N95 Ilaalinta heerka KN95 BFE> = 95% Baakadaha 30 kumbuyuutar / sanduuq, 10 sanduuq / kartoon. Cabbirka kartoonka: 6 ...
Waa maxay dharka ka hortagga caafimaad? - Qeexida iyo Codsiga Dharka Ilaalinta Caafimaadka, sidoo kale loo yaqaan dharka difaaca caafimaadka, gebi ahaan difaac badbaado leh, ama kiimiko difaac. Dharka badbaadada caafimaadku waxaa loola jeedaa dharka badbaadada ee ay isticmaalaan shaqaalaha caafimaadka (dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha, shaqaalaha caafimaadka dadweynaha, nadiifiyeyaal, iwm) iyo dadka galaya goobo caafimaad oo gaar ah (sida bukaanka, booqdayaasha isbitaalka, dadka soo gala aagga cudurka qaba, iwm.) . Dharka ilaaliyaha caafimaad wuxuu leeyahay moi ...
Maqaalkani wuxuu si faahfaahsan u sharxi doonaa dharka kahortagga caafimaadka 4-ta soo socota. Soosaarista dharka ilaalinta caafimaadka Maxay yihiin waxyaabaha cayriin ee caadiga ah iyo waxqabadka dharka ilaalinta caafimaadka. Soo saarista dharka ilaalinta caafimaadka. Shuruudaha tayada ee dharka ilaalinta caafimaadka Maxay yihiin heerarka tayada wadaagga ah? Waa maxay walxaha imtixaanka? Sidee loo isticmaalaa dharka ilaalinta si sax ah? Xirashada dharka kahortagga caafimaadka. Amarka in laga baxo bisha…
Maskaxda 3m ee KN95